SEO ၏အန္တရာယ်များနှင့်အပြစ်ကင်းသောမဟာဗျူဟာကိုမည်သို့အကောင်အထည်ဖော်မည်နည်း Martech Zone
သောကြာနေ့, မတ်လ 22, 2013 သောကြာနေ့, မတ်လ 22, 2013 Douglas Karr
မနေ့ကကျနော်တို့ကကြီးစွာသောဒေသဆိုင်ရာညီလာခံရှိခဲ့ပါတယ် မြောက်ဝင်ငွေခွန်။ ခေါင်းစဉ်များသည်စီးပွားရေး၊ နည်းပညာနှင့်စျေးကွက်အမျိုးမျိုးတွင်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် SEO ၏အန္တရာယ်များအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ထိုနေ့ကိုစတင်ခဲ့သည်။
အများကြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကမှပဲကျွန်တော်ဟာကွဲလွဲတဲ့အကြံဥာဏ်တွေရခဲ့တယ်လို့ကျနော့်ကိုတက်ရောက်ခဲ့သူတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုပြက်ရယ်ပြုခဲ့တယ်။ ငါသဘောမတူဘူး SEO ကိုဘယ်လိုအသုံးချသင့်တယ်၊ မဟာဗျူဟာကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်သင့်သလဲဆိုတဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်လုံးဝပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီ။
အဆိုပါပြSEOနာ SEO ဆိုသည်မှာသင်္ချာပြproblemနာဖြစ်သည်။ ရှာဖွေခြင်းသည်လူပြproblemနာဖြစ်သည်။ SEO ကုမ္ပဏီအများစုသည်ပြtheနာကိုမှားယွင်းသောလမ်းကြောင်းမှချဉ်းကပ်ကြသည်။ ရှာဖွေရေးအသံပမာဏနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုကြည့်မည့်အစားသူတို့သည်သင်၏စကားပြောဆိုမှုများ၊ ထို visitors ည့်သည်များရောက်ရှိနေပုံကိုကြည့်ရှုသင့်သည်။ ထို့နောက်စည်းကမ်းချက်များအပေါ်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသည်အပိုထပ်ဆောင်းအသွားအလာကိုမောင်းနှင်နိုင်၊
သင်၏ဖောက်သည်များမည်သည့်နေရာနှင့်မည်ကဲ့သို့ရောက်ရှိနေသည်ကိုနားလည်မှုလွဲ။ အောင်မြင်သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှု၏အဓိကသော့ချက်မှာရိုးရှင်းပါသည်။ Google Says ကိုလုပ်ပါ။ တကယ်တော့တော်တော်လေးလွယ်ကူပါတယ်။ Google မှာကြီးတယ် SEO လမ်းညွှန် သူတို့အဖြစ်ထုတ်ဝေရန် ၁ မျက်နှာစုံ SEO လမ်းညွှန်.
အဆင့်ဆင့်၊ မြေပုံများ၊ စာမျက်နှာဖွဲ့စည်းပုံ၊ သော့ချက်စကားလုံးအသုံးပြုမှု၊ စာရေးသူ၊ မိုဘိုင်း၊ recency၊ ဒေသဆိုင်ရာပထဝီဆိုင်ရာရှာဖွေမှုနှင့်အကြိမ်ရေအားလုံးသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုတိုးတက်အောင်နည်းလမ်းများအဖြစ်ဆွေးနွေးထားသည့်အချက်များပါဝင်သည်။ လူမှုရေးသည်ယခုအခါအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင်ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်များကိုတွန်းအားပေးနေသည်။ လူမှုရေးမောင်းနှင်မှုသည် (အစုရှယ်ယာများပိုမိုများပြားလာရန် (ချိတ်ဆက်မှုများကိုချိတ်ဆက်ထားသော…အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုမောင်းနှင်ရန်)) အတွက်သာမက Google တွင်ပါ ၀ င်သည် တကယ်စစ်ထဲဝင်သွားပြီ နှင့် blackhat နည်းဗျူဟာ။ နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကြော်ငြာတွေပါတဲ့အခပေးအဝေးရောက်အစီအစဉ်တွေကိုတိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်။
စက်ဝိုင်းအပြည့်အစုံ…အလွန်ကောင်းသောရှာဖွေရေးယန္တရားကို SEO အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်မှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီ၏ပခုံးပေါ်တွင်ထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။ အလွယ်တကူမျှဝေနိုင်သောသက်ဆိုင်ရာထူးခြားသည့်အကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်ခြင်းသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာသည့်အခါသင်၏ရာထူးလိုက်နာလိမ့်မည်။
Tags: + googleရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationSearch ကိုစျေးကွက်seoseo မဟာဗျူဟာ
Mobile APPeal - မိုဘိုင်းရှုခင်းကိုလေ့လာခြင်း
SpeakPipe - Voicemail ကိုသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ပါ
မတ်လ 22, 2013 မှာ 12: 03 pm တွင်
ဒေါက်ဂလပ်ကတော့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့စာဖတ်သူပါ။ စာဖတ်ခြင်းသည်မည်မျှသန့်ရှင်းပြီးလွယ်ကူသည်ကိုနားလည်ပါ။ ဤအချက်ကိုဖောက်သည်အနည်းငယ် (သင်၏ဆလိုက်များ) သို့လွှဲပြောင်းရန်စဉ်းစားခြင်း
မတ်လ 22, 2013 မှာ 12: 48 pm တွင်
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် @prosperitygal: disqus!
မတ်လ 26, 2013 မှာ 5: 07 AM
၎င်းသည်အလုပ်လုပ်သောစည်းမျဉ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ SEO ရှာဖွေမှုအဆင့်နှင့်ကောင်းမွန်သောအရောင်း ၀ င်ဆောင်မှုကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေရန်ပစ္စည်းများစွာကိုလုပ်ရန်ကြိုးစားကောင်းပြုလိမ့်မည်။ သို့သော် Google ပြောသမျှကိုသင်လိုက်နာသရွေ့သင်အဆင်ပြေလိမ့်မည်။